Sida loo RIP Flash Videos la mid click
> Resource > Video > Sida loo RIP Flash Video Website ka fudayd
Websites badan oo sida YouTube Cudarada flash videos in bogagga, kaas oo awood u sare Tifaftirayaasha geeyo video inuu ciyaaro daalacashada si habsami leh. Laakiin si ay u dooxi flash video ka websites kuwa dhibaato wayn. Waa maxay dheeraad ah, xataa haddii aad dooxeen flash video si guul ah in hab qaar ka mid ah, waxaad laga yaabaa in aanay awoodin inuu iyaga u ciyaaro qalabka la qaadi karo sababtoo ah qaab incompatibility. Ha hadda ka welwelin. Wondershare AllMyTube ( AllMyTube for Mac ) wuxuu noqon doonaa qalab fiican oo caawin doono kuwa dhibaato, taas oo ah isku-dar ah ripper flash iyo Converter. Bal aan waqti lahayn oo u guuraan si ay u arkaan sida ay hoos ku shaqaysaa.
Marka hore, aynu diyaar u hesho. Download barnaamijka oo ku xidh. Ogsoonow in ay jiraan laba nooc. Waa in aad dooratid mid ka mid sax ah si aad u computer. Waxyaabaha soo socda ayaa diirada doonaan oo keliya version daaqadaha tan iyo labadii shaqeyn dhow si la mid ah.
1 Meel flash videos in dooxi
Dul web browser bogga of flash video ah. Waxaa jira websites video badan oo aad ka soo xusho, sida YouTube, Hulu, iyo in ka badan. Riix video ay ku ciyaaraan. Ogsoonow in aad la ciyaareyso videos flash oo ku saabsan mid ka mid ah saddex daalacashada oo waaweyn: IE, Firefox iyo Chrome.
2 Rip flash videos laba siyaabood
Barnaamijku wuxuu siiyaa laba siyaabood oo waad dooxi doontaa flash video. Mid ka mid ah waa iyada oo button Download ah. Marka video la ciyaaro, waxaad ka heli kartaa button Download Midigta sare ee shaashadda video ah. Waxaa Click iyo bilowdo flash video dooxeen.
Habka kale waa iyada oo url. Waxaad nuqul ka kartaa url ee video flash ku bar cinwaanka. Markaas tago barnaamijka si paste button URL guji. Tani waxay kaa caawin doontaa in loo gaaro natiijo la mid ah.
3 flash videos Play on kombuyuutarrada gacanta
Sida kor ku xusan, ripper flash oo taasuna waa Converter ah, kaas oo awood kuu inuu u ciyaaro flash videos on qalabka la qaadi karo aad.
Raadi button loogu badalo xaga midig ee video ka dooxay maktabadda soo bixi a. Waxaa Riix dooro qaab wax soo saarka ah. Waxaad dooran kartaa qaabab caadiga ah sida AVI, MOV oo dheeraad ah, ama qalab sida iPad, iPhone oo dheeraad ah. Markaas riix OK iyo waxa uu sameeyo.
Barnaamijka waxa kale oo uu leeyahay ciyaaryahan dhisay-in uu u ciyaaro videos flash ama videos wixii qaabab kale ee caadiga ah. Waxa kale oo aad dajiyaan karaa videos on your computer maktabadda soo bixi barnaamijka si aad u maareyso. Sidaas, waxaad ka heli kartaa oo aad u aragto video deegaanka si fudud. Waxay u egtahay weyn, sax? Ha ka waaban inaad kala soo baxdo waa in ay isku day ah.